ပြာမှပေါ်ပေါက် Izmir - rayhab ပါလိမ့်မယ်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirIzmir မှပေါ်ပေါက်ပြာ
31 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Izmir အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အကြီးဆုံးမီးတစျဦး၏အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမယ့်ကမ်ပိန်းတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ထိုဘေးဥပဒ်ကို site ၏ဖိတ်ကြားချက်ကိုအဖြစ်အတူတကွ Menderes Efemçukuruထောင်ပေါင်းများစွာ Izmir ကြပါတယ်သောမီးလောင် Izmir အစည်းအဝေးအတွင်းကျင်းပအတွက်လိုအပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုရရှိရန်နှစ်ဦးစလုံးကိုကြည့်ပါ။
İzmirliler, အ Karabakh Menderes အတွက်တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 18 စတင်ပြီးတော့5မှ Seferihisar ၏တထောင်ဟက်တာပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သောတောမီး၏အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအတူတကွတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Izmir မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer နှင့်İzmir၏လူအားလုံးအတွက်စတုတ္ထ Menderes EfemçukuruDevedüz Mevkii'nde ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည် "ormanizm ဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါ Izmir အစည်းအဝေးများဖိတ်ခေါ်ကား, ဘေးဥပဒ်ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အများပြည်သူပါဝင်မှုသေချာစေရန် " လာ. ကွညျ့ကွ, ကိုယ်ရံတော်" ။
Izmir ထောင်ပေါင်းများစွာ၏, "သစ်တောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြာ၌နောက်တဖန်ပင်ပျိုလန်းပါလိမ့်မယ်", "Izmir ပြာကနေပျေါပေါကျလိမျ့မညျ" နေချိန်မှာတိတ်ဆိတ်စွာနေရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Soyer ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကို "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ကိုမွငျလြှငျ, ရောကျ လာ. , ကျနော်တို့ဟုကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်" ဟုမီးလောင်ရာဧရိယာ၌ကျင်းပသည့်ဖြစ်ရပ်ကြပါတယ်။ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌGülizar Bicer Karaca, Izmir လက်ထောက်, မြို့တော်ဝန် Izmir ဘားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌတွေကတော့ရွာတွေကို, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းအဖွဲ့များ, အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် CHP သဘာဝခငြ့်အရေး, အလီအစ္စမေးလ် Korkmaz ရဲ့မိခင်ဆန္ဒပြပွဲများကာလအတွင်း၎င်းတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သူခရီးသွားပန်းခြံ၏ Izmir အစည်းအဝေး၌ကြီးသောစိတ်ဝင်စားမှုပြ Amal နှင့်သူမ၏ဖခင် Shihab Korkmaz, ပင်လယ်ပြင်Gezmiş'inGezmiş Bora အဘိဓါန်ရဲ့အစ်ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ , ကိုယ်စားလှယ်များမြေတိုင်းအင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏လယ်ပြင်ဝင်ရောက်နေစဉ်သီချင်း ဆို. "ကလေးများယုံကြည်" ဟုစာတန်းများချိတ်ဆွဲထားသည်ဖွင့်လှစ် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြာကိုကနေထမည်သစ်တခုပုံပြင်ရေးထားမည်" ။
"Ormanizm ဖြစ်ပါတယ်" အစည်းအဝေး Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ၏အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားİzmirများ၏လူမျိုး၏စည်းရုံးခြင်းပါဝင်ခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အားကြေးဇူးတငျ, " လာ. ကွညျ့ကွ, ကိုထိန်းသိမ်းထား 'ငါတို့ကဆိုသည်။ သငျသညျ လာ. သင်မြင်လျှင်, ကျနော်တို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခံ့စေ၏။ ယနေ့တွင် 30 သြဂုတ်လ။ မြေသြဇာကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးဘီဘင်ကသူကိုသူတို့သမိုင်းအတွက်ယနေ့မှတ်ပုံတင်အဖြစ်မျက်စိနှင့်တစ်ဦးအမှတ်ရစရာအောင်ပွဲ blinking မရှိဘဲလှပသောဘဝပေးသောပွညျ၌ငြိမ်းချမ်းရေးတွင်နေထိုင်ကြသည်။ သငျသညျမေတ္တာနဲ့ဤပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတူတကွလာမယ့်အဘို့သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ယနေ့မိမိတို့၏အဖိုးတန်မှတ်ဥာဏ်နှင့်အတူသွားပါ။ ဒီနေ့ Izmir ဖို့တူရကီအတွက်အလွန်အရေးပါသောအစအဦးအောင်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
အဓိကဘေးအန္တရာယ်ပစ်ခတ် "သူတို့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတ Soyer မျဉ်းတားအတူတကွမီးလောင်ရာဧရိယာကိုခေါ် 500 ဟက်တာနေထိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသောဧရိယာများ၌မီးရှို့5တထောင်ဟက်တာကိုငါသိ၏။ ကျနော်တို့ကဒီဧရိယာကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြုလိမ့်မည်။ မဟုတ်တဦးတည်းစတုရန်းမီတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖွင့်လှစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသံမဏိလက်နက်ဆန့်ကျင်၌ရပ်အဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးအကြံပြုချက်များ, ဒီမှာအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကောင်စီ၏အတွေးအခေါ်များအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ Izmir ကောင်စီ၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်အရာရှိတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကမ်ပိန်းမ fad စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ငါအတူတူလာကြပြီမဟုတ် '' ငါ့အသြတ္တပ္ပစိတ်ပဲအနားယူနေတဲ့သစ်ပင် dikel '' ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘယ်မှာကျနော်တို့ Izmir, မီးလောင်ရာဧရိယာနှင့်အတူထွက်ရရန်မည်သို့သစ်တောကာကွယ်ပေးနိုငျသညျ, ထိုသို့သောဘေးအန္တရာယ်အောက်မှာအသက်ရှင်ရန်ဘာလုပ်ရမှန်းဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်အတူတစ်ပင်ပျိုစိုက်ပျိုးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တစ်ခုတည်းအစိမ်းရောင်ပေါင်းပင်နှင့်အတူဤပွညျသူပွညျသားတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့စိတ်သက်သာရာမဟုတ်ပါဘူး။ သာဤနည်းငါတို့သားသမီးအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေးထွက်ခွာနိုင်မယ့်အနာဂတ်ဂုဏ်ယူပါလိမ့်မည်ဆိုသောကြောင့်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
သစ်ပင်, သစ်ပင်များနှင့်သမ္မတ Soyer, သူ၏မိန့်ခွန်းကိုဆက်လက်သောစကားဟူကထပ်ပြောသည်ကြောင်းသစ်တောမူဝါဒသည်: "ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်တောများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံတန်ဖိုးများ။ သစ်တောရေးရာကျွန်ုပ်တို့၏န်ကြီးဌာန, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, Izmir မှ Izmir ကနေသစ်တောတွေကာကွယ်နေဖြင့်အခြားလူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တူရကီအားလုံးကိုအကောင်းတစ်သင်ခန်းစာပေးပါလိမ့်မယ်။ လက်၌လက်တော်သည်ဤမြေပေါ်တွင်အတူတူရှိ with'll ။ ငါ Izmir ကနေဖြစ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ Izmir "ပြာကနေမွေးဖွားသိတယ်။
သဘာဝအခွင့်အရေးGülizar Bicer Karaca တာဝန်ခံ CHP လက်ထောက်ဥက္ကဌတိုတောင်းတဲ့မိန့်ခွန်း, "ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာများ၏အခွင့်အရေးအတွက် Izmir ၌ဤအပျနှံကြည့်ဖို့ကြှနျုပျတို့အားလုံးအတှကျမြျှောလငျ့ခကျြရှိ၏။ တူရကီနိုင်ငံ Izmir ကနေမြင့်တက်ပထမပြာအားလုံးအတူတကွမျှော်လင့်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Izmir ဘားအစည်းအရုံးကသမ္မတ Ozkan Yucel ဒေသလိုအပ်သောရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်နွှဲများအတွက်အကောင့်ဖို့တောင်းခံရလျှင်သူတို့လက်တော်နှစ်ဖက်အပေါ်ပစ်ခတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားများတစ်ဦးတင်ဆက်မှုမှသိကောင်းစရာများကိုဖန်ဆင်းစကားပြောပြီးနောက်ဘာသာရပ်အပေါ် Soyer ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများ၏ Chairman ။ စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်ကြီးများအသင်းဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာ လေးလေးနက်နက်ဂေဟစနစ်ထိခိုက်ပျက်စီးကြောင်း Tevfik တူရကီမီး, ဤဒေသများ၏သွန်းသတ္တုတူးဖော်ရေးအစားထိုးပျိုးပင်များစိုက်ပျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောမြေယာအသုံးပြုမှုများ၏ကာကွယ်မှုများအတွက် check လုပ်ထားရပါမည်ပြန်ပြောပြ။
သစ်တောအင်ဂျင်နီယာများကသမ္မတ Sabahattin ပညာရှိ Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထိသစ်သားကိုမီးရှို့ရာမှမီးဧရိယာ clean ရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သစ်တောရေးရာပါမောက္ခ၏အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်ဌာန မီးလောင်သောသစ်တောများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေdoğanay Tolu ဧရိယာ၏ 169 ။ အမျှမကြာမီမီးရှို့ရာဒေသများအသေသစ်သားကနေသန့်စင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအဖြစ် "ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှသစ်တောများ၏မဖြစ်မနေပြန်လည်ကြောင့်ပြန်ခေါ်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလည်းလိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများလျှင်ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်နှင့်ကားတစ်စီးအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းကိုထောက်ခံပါတယ်။ re-သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း, afforestation မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘို့မလိုအပ်လည်းမရှိ။ ကျွန်တော်ဘယ်မှာအလိုအလျောက်တစ်တော၌အဟောင်းသစ်ပင်များ၏အစေ့ကိုအသုံးပြုဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများမှသဘာဝစွန့်ခွာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမီးကာကွယ်တားဆီးဖို့ဖြစ်သင့်တယ်။ ကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျသညျအလုပျ၏စည်ပင်သာယာအများပြည်သူအသိပညာ။ ရဟတ်ယာဉ်များနှင့်လေယာဉ်ပျံကပထမဦးစွာမီးကအရေးကြီးတယ်, ဒါပေမယ့်ကြမ်းပြင်ကနေအမှန်တကယ်အရေးကြီးသောကြားဝင်မီးငြိမ်းအေးစေရန်အခါ။ မြူနီစီပယ်နှင့်ဝန်ကြီးဌာနများဤပြဿနာအပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Soyer, ကင်ပိန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမျှဝေ
Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer အဆိုပါအထူးကု၏နိုင်ငံသားများနှင့်သားသမီးများ၏မိန့်ခွန်းတစ်ဦးချင်းစီကိုနားထောငျပွီးနောကျ, ကဆိုသည်။ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြလာသောအခါမျက်ရည်ကျတချို့ကနိုင်ငံသားတွေ, kindergartners သဘာဝတရားအမည်ရှိမိန်းကလေးတစ်ဦးဆောင်သော Izel လည်းတစ်ဦးချင်းစီသည်သူငယ်အတွက်ပျိုးပင် Soyer ကနေကိုစိုက်ခံရဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကမေးတယ်။ Izmir မြို့တော်ဝန် Soyer ထွက်သယ်ဆောင်ခံရဖို့ကင်ပိန်း၏မိန့်ခွန်းအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူနိုင်ငံသားတွေက "ကျနော်တို့မြို့3800 ဘယ်မှာကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှသစ်တောဧရိယာ၏တထောင်ဟက်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့သစ်တောပြောင်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်တောင်းဆိုချက်များကိုစေပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ 2020 အတွက်ဥရောပအစိမ်းရောင်မြို့တော်ဖြစ်အမည်ကို။ ကြှနျုပျတို့ပွုအဆိုပါအလုပျ, ငါတို့မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံ Izmir ရာ၌သဲကန္တာရသဲတအတားအဆီးသို့လှည့်ဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစက်တင်ဘာလ9အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲစည်းရုံးလိမ့်မယ်စတင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနုပညာရှင်တွေဒီဖျော်ဖြေပွဲကနေဝင်ငွေ generate ပါဘူး။ 10 ပေါင်လှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်ဖျော်ဖြေပွဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်İzmirliler။ ကျွန်ုပ်တို့၏ညီလာခံတစ်ဦးမေတ္တာကမ်ပိန်းစုစည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုယူပါလိမ့်မယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။9စက်တင်ဘာလပြည်မှမြေပုံအဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ဖို့ဧရိယာ၌ afforestation စေမည်ထားမည်။ အဘယ်သူသည်သူချုပ်ဖို့လိုသည်ဘယ်မှာဖြစ်သစ်ပင်များလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ တဖန်ရေကိုပြုလိမ့်မည်ရေသစ်တောရေကန်ထဲမှာရဟတ်ယာဉ်အလှူငွေယူပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာမီးဘူတာရုံတည်စေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေးတွေ, မီးဖြည့်ဆည်းကျွန်တော် open-လေကြောင်းပြတိုက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မီးကြောင့်ထိခိုက်ထားတဲ့ဧရိယာသူတို့ကိုငါပေးမည်။ သစ်တောများကျောင်းများဆောက်လုပ်အားပေးလေ့ကျင့်ရေးသစ်တောများကိုငါပေးမည်။ ကျနော်တို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမီးထဲကစက်တင်ဘာလ 2789အပေါ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးစိုက်ပျိုးမြေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ထိခိုက်ပါလိမ့်မည်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဖြောင့်မတ်မွေးဖွားတိုင်းသည်သူငယ်အတွက်အပင်တစ်ပင်စိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သစ်ပင်နှင့်အတူကြီးထွားဖို့İzmirliler။ "
အဆိုပါကမ္ဘာကျော်စန္ဒယားပညာရှင်Gülsinခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက် Izmir အစည်းအဝေး, တိုတောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုပေး၏။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲပြီးနောက် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံတခုထူးခြားသောနေ့ကခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ကြီးပြင်းအချို့အကြံပြုချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များအတွက် "ဟုအဆိုပါနေ့စွဲ Ormanizm":
"ဒီနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရန်ပုံငွေများရှေ့မီးလေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်။ သငျသညျ "ဟုအဆိုပါမြို့နယ်မှသစ်တောအင်ဂျင်နီယာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ယူနစ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
"အကြွင်းမဲ့အာဏာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မီးရှို့ရာဒေသများသင်ရပါတယ်။ ဒေသတွင်း၌သတ္တုတွင်းကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတားမြစ်။ "
"မိမိဆန္ဒအလျောက်အဖွဲ့အစည်းများဖန်တီးနေကြတယ်, မီးဧရိယာထဲမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ချင်သောသူတို့အဘို့ရာအရပျကိုရယူပါ။ "
"သင်ပန်းချီဆရာများသစ်သားမီးလောင်ရာအပေါ်ပန်းချီပြုပါက, ရန်ပုံငွေရှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးထောကျပံ့ရောင်းပေးနေကြတယ်" ။
စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်ကြီးများအသင်း Izmir ဘဏ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း, မီး၏လယ်ပြင်တွင်ဂြိုဟ်တုဒေတာကနေဆင်းသက်လာမီးပြီးနောက်သစ်တောမြေ၏တထောင်ဟက်တာထိခိုက်ခဲ့ကြသည်5၏အခြေခံပေါ်မှာလုပ်တွက်ချက်မှုအရသိရသည်သုံးရက်ကြာခဲ့သည်။5ပြင်းထန်မီးလောင်ဒဏ်ရာများလူတန်းစားများ၏3500 အတွက်တထောင်တထောင်ဟက်တာ။ ဒုတိယဒီဂရီမီးလောင်ရာ 1500 ဟက်တာအကြောင်းကိုကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကဆိုသည်။ မြောက်ဘက်ကနေမီး၏တောင်ဘက်လိုင်းကိုရန်အရှည် 15 ကီလိုမီတာခန့်မှန်းထားသည်။ ဤသည်တွက်ချက်မှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Izmir ဖြစ်ပါသည် Karşıyaka (5 110 တထောင်ဟက်တာ) သည်အထိခရိုင်ကြီးမားသောဧရိယာ illuminated ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
အဆိုပါခရိုင်ကိုပိုပြီးထက်မျက်နှာပြင်ဧရိယာကြောင်းထင်ရှားသကဲ့သို့မီးလောသစ်တောဧရိယာ၏ပြင်းအား, Urla ၏သစ်တောဆုံးရှုံးမှု (2 တထောင် 125 ဟက်တာ), အလံ (3 တထောင် 426 ဟက်တာ) နှင့် Narlidere (4 တထောင် 461 ဟက်တာ) နားလည်နိုင်ရန်အတွက်ခရိုင်နှင့်ဖွဲ့တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ ဘေးဥပဒ်ခုနှစ်တွင်နီးပါးနှစ်ခု Urla ခရိုင်၏ရလဒ်ကိုသို့မဟုတ် Karşıyaka ဒါဟာအရွယ်အစားကိုမီးရှို့နေတဲ့သစ်တောဧရိယာ၌ထင်ရှား၏။
စက်တင်ဘာလအတွင်း9စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖျော်ဖြေပွဲ
Izmir သစ်တောများများ၏ကာကွယ်မှုများအတွက်စက်တင်ဘာလ9စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖျော်ဖြေပွဲတွင်ကျင်းပခဲ့သည်လိမ့်မည်။ သစ်တောဖျော်ဖြေပွဲ Haluk Levent, Halil Sezai, တုပ်ကွေးရဲ့, Niyazi Koyuncu, Hayko, Oguzhan Ugur, Piyanc စာရာများနှင့် swarthy Gazapizm join ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနာရီဖျော်ဖြေပွဲကနေဆင်းသက်လာဝင်ငွေခွန် 18.30 Izmir entry ကိုအခကြေးငွေမှာစတင်ပါလိမ့်မယ်သစ်တောများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
အဘယ်သူသည်ဘီးတပ်ကုလားထိုင် 67 နှစ်အရွယ်နေ့ Kocak နှင့်အတူထိုအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သူက "ဒီမှာနေရာတိုင်းပြာကိုရှိခဲ့လမ်းကိုအလွန်အပြုသဘောဆောင်တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, ဒီကမ်ပိန်းကိုထုတ်ဆောင်သွားကြ၏။ ကျနော်တို့နေဆဲပြာအနံ့ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် Izmir င်း၏ပြာကိုကနေပြန်လည်မွေးဖွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်တောကိုစိုက်ပါလိမ့်မည်ပြာပင်ပျိုတွေနဲ့စိမ်းလန်းစိုပြေဖြစ်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
EfemçukuruDevedüz Mevkii'nde မှစက်ဘီးစဉ် biker ကြာသပတေးနေ့ညဦးယံအချိန်အပေါ်မှာသက်ရောက်လေ၏။ သူတို့တစ်တွေခက်ခဲတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး parkurl Menderes ကြည်လင် Dulkadir "ကျနော်တို့စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့သဘောသဘာဝဒီဧရိယာမှလာမယ့်ခဲ့ကြသည်ကိုကြည့်, မီးရှေ့မှာဒီလမ်းကြောင်းအသုံးပြုနေသည်ကိုထောကျပံ့ဖို့လာပါတယ်။ ငါမီးလောင်ရာသစ်ပင်များüzgünüzကိုမြင်လျှင်သည်အထိသူမသည်ဟစျကျွောလေ၏။ ဒါပေမယ့်ဖွင့်မပေးပါဘူး။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကျနော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူဤနေရာတွင်ပြန်လာ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဦးအလုပ်သမားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေဖြင့်မီးဧရိယာထဲမှာငါတို့သားသမီးကိုမမွငျနိုငျသျောလညျးကြှနျုပျတို့ဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့မီးလောင်ရာသစ်တောများပေးရန်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဖျော်ဖြေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
သစ်ပင်များနှင့်လက်ဝဲဇော်မွှားပန်းနှင့်နှင်းဆီပန်းများအသင်းကိုမီးရှို့နေစဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန်ဧရိယာ၏ Seferihisar တိရိစ္ဆာန်သူငယ်ချင်းများ။ အစည်းအရုံးကသမ္မတ Fevzi Ozkan, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ်ပင်များမီးရှို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောကွယ်လွန်သူနဲ့အတူအသက်ရှင်လျက်မီးရှို့ကြ၏။ ကြှနျုပျတို့သညျဤလှပသောသစ်တောကျွန်တော်တို့ရဲ့ချမှတ်ခြင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါ "ဟုသူကပြောသည်။
Izmir ဂလားပင်လယ်အော် Rebirthing ပါလိမ့်မယ် 27 / 03 / 2019 Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ပင်လယ်ကွေ့ 70-80 တစ်နှစ်က၎င်း၏ယခင်ပြည်နယ်သို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုဧရာစီမံကိနျးအတှကျနောကျတစျအလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်းပေါ်တွင်ပဏာမအလုပ်သဘာဝဘဝ 13.52နှင့်အတူတညျဆောကျပါလိမ့်မည်စောင်ရေလိုင်းများမြောက်ဝင်ရိုးဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းများကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ကီလိုမီတာပင်လယ်ကွေ့ကနေလာကြလိမ့်မည်ပြီးစီးခဲ့ပြီ။ အကောင်အထည်ဖော်မှုစီမံကိန်းကိုအောက်တိုဘာလအတွက်ကိုအပ်ပါလိမ့်မည်ပြီးနောက်သတင်းများအရ izsu အဆင့်အတွက်တင်ဒါများယူခြင်း၏လိုင်းများစတင်စကင်ဖတ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ကိုနောက်ကောက်ပင်လယ်ကွေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့် "Izmir ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း၏" ရည်မှန်းချက်ရောက်ရန်ပြင်ဆင်ထားတစ်ဦးထက်ပိုအရေးကြီးသောအဆင့်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည် "သင်ပင်လယ်ကွေ့ရေကူးနိုငျသညျ" shoaling ကာကွယ်တားဆီးဖို့။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီလလေ့လာမှု5ရဲ့အဆုံးမှာနုအနိုင်ရ ...
TCDD နှင့်အတူ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ဒုတိယအကြိမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Izmir ဂလားပင်လယ်အော်များအတွက်စားပွဲ၌ထိုင်လျက် 07 / 02 / 2012 ဒါဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုမော်ဒယ်ထုတ်ဖေါ်ဖို့လိုင်းအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့ TCDD နှင့်အတူမြို့တော်မြူနီစီပယ် shallowing မပါဘဲပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့်ဆိပ်ကမ်းကိုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်အတွက်လက်သှားသော Izmir ၏ပင်လယ်ကွေ့ရုံတူရကီမှာထပ် Aliaga-Menderes အမြည်း။ Izmir Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတူပူးပေါင်းပြနမူနာသွင်းဖို့ 80 Aliaga meander လိုင်းကီလိုမီတာရထားလမ်းစနစ်, တူရကီပြည်နယ်မီးရထားများတွင် Izmir ဂလားပင်လယ်အော်၏ဒုတိယအချိန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်စားပွဲပေါ်ထိုင်တော်မူ၏။ မြောက်ဘက်ပင်လယ်ကွေ့တစ်စောင်ရေရုပ်သံလိုင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ချောင်းနှုတ်အဆက်မပြတ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် shoaling နှင့်လအတွင်းအဘို့မိမိတို့အလုပ်အတွက်, port ပြည်နယ်မီးရထားတိုးချဲ့နေဖြင့်၎င်း၏စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုရှင်းလင်းရေး, အရေးပါသောအချက်ရောက်ရှိလာသည်ဆက်ပြောသည်။ TCDD Izmir ဂလားပင်လယ်အော် ...
TCDD နှင့်အတူ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Izmir ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ် 09 / 02 / 2012 Aliaga - Izmir ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်, အပ်နှင်းအတူတကွ Izmir ၏ TCDD Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အတူအပြေး 80 ကီလိုမီတာရထားလမ်းအတွက် Menderes ။ ဒါဟာအရေးပါတဲ့အချက်ရောက်ရှိလာသည်ဆက်လက်မြောက်ဘက်ပင်လယ်ကွေ့တစ်စောင်ရေရုပ်သံလိုင်းကိုဖွင့်ပြီးအစဉ်မပြတ် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် shoaling ကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုခငျြလဘို့မိမိတို့အလုပ်အတွက် TCDD ၏ဆိပ်ကမ်းတိုးချဲ့နေဖြင့်၎င်း၏စွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူချောင်းနှုတ်ရှင်းလင်းရေး။ TCDD သည် EIA ကိုအစီရင်ခံစာ၏ Izmir ၏ပင်လယ်ကွေ့နှင့် Izmir ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း EIA ကိုနှင့်ပြင်ဆင်မှုယူဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများပေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ခဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မယ်။ ဒီပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်အသစ်တခုအစအဦး ...
Izmir ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ခံရဖို့ 22 / 09 / 2012 TCDD ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်မှာတော့တူရကီနှင့် Izmir ဆိပ်ကမ်းလူမှုစီးပွားတန်ဖိုးလစာတိုး Izmir ဂလားပင်လယ်အော်ရဲ့ဂေဟစနစ်စနစ်များကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်, '' သော Izmir ၏ပင်လယ်ကွေ့နှင့် Izmir ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းဆက်လက်၏မြူနီစီပယ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်စီမံကိန်းများ၏ TCDD İzmirမြို့တော်ကိုညွှန်း တောင်ဘက်ဝင်ရိုးချန်နယ် (အညွှန်း) တစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အခန်းတစ်ခန်း maneuvering ခံရဖို့ချဉ်းကပ်မှု, ဆိပ်ကမ်းအင်တုံနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့် xnumx'inc သောအဘို့ကိုကွန်တိန်နာ terminal ကိုဒေသများတွင်ဖွဲ့စည်းနှင့်မြောက်ပိုင်းဝင်ရိုး (စောင်ရေ) တစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခံရဖို့ effluent တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ရုပ်သံလိုင်းလေ့လာမှုများပါဝင်သည်သတင်းပို့ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, အလုပ်ရုံ, Izmir ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းမိတ်ဆက်သည် Izmir အတွက်စက်တင်ဘာလ2စတင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးနှင့်ဂေဟစနစ်စီမံကိန်းကိုပြန်ဆွေးနွေးကြသည်။ source: ...
Izmir ရဲ့စီမံကိန်းများကို '' Lightning '' ဦးစားပေး | တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း 17 / 11 / 2012 Izmir ရဲ့စီမံကိန်းများကို '' Lightning '' ဦးစားပေး | တူရကီအကြားတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကယေဘုယျအတွက်တစ်နှစ် 2013 33 မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်ရွယ်ချက်များမှပြဋ္ဌာန်း Izmir သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိပ်ကနေအောက်ခြေကြီးမား input ကိုပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ရာစု '' 2013 တစ်နှစ်တာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အစီအစဉ်နှင့်ဖြစ်ပွားနေသောအဆုံးသတ်ရည်ရွယ်သည်ဟုဦးစားပေးစီမံကိန်းများကိုများ၏စာရင်းအားဖြင့်လာမည့်နှစ်တွင်ဝန်ကြီးဌာနကစတင် '' ရောက်ရှိİzmir-ပင်လယ်ကွေ့လမ်းမကြီး Tube ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Crossing 'နဲ့' တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း '' ထားပါတယ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတစ်နှစ် 2013 ဝန်ကြီးဌာန Izmir ၏စီမံကိန်းများကိုမဘို့ရာခန့်ကအခြားမဟာဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်များများထဲတွင်နေသောခေါင်းစဉ်: Izmir Vecihi Hürkuş (Kaklıç) ...
Izmir ဂလားပင်လယ်အော် Rebirthing ပါလိမ့်မယ်
TCDD နှင့်အတူ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ဒုတိယအကြိမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Izmir ဂလားပင်လယ်အော်များအတွက်စားပွဲ၌ထိုင်လျက်
TCDD နှင့်အတူ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Izmir ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်
Izmir ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းပြန်လည်ခံရဖို့
Izmir ရဲ့စီမံကိန်းများကို '' Lightning '' ဦးစားပေး | တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း
Toptaşတူရကီ Izmir အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းနှင့် Izmir လမ်းမကြီးမှတူရကီဟုမေးထားပါတယ်
BB Izmir လေလံ၏ Izmir ခရီးသွားလက်မှတ်စနစ်တိုးတက်မှုစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးကနျြးမာရေးစခန်းများ၏ဆက်စပ်မှု
Izmir Üçyolဘူတာ - Dokuz Eylülတက္ကသိုလ်ကျောင်းပရဝုဏ် Tinaztepe - Buca Koop ။ Izmir ကနေနာရီစီမံကိန်း
နှစ်ဖက်ပေါင်းစပ်ဖို့ Izmir Izmir ဂလားပင်လယ်အော် Crossing စီမံကိန်း
Izmir ဂလားပင်လယ်အော် Crossing ပြုမိပါလျှင်နှစ်ဖက် Izmir ၌စည်းဝေးကြပါလိမ့်မယ်